A Guide Full si ay u gudbiyaan Movies, Playlists, Podcasts iyo Music ka Lugood in Android
Iyada oo heerarka sii kordhaya ee diiwaan gelinta ee jaamacadaha, inta badan, ardayda ka helin Naftooda ma helo sida badan ka muxaadaro ay sabab u tahay ciriiriga fasalka. Marka la mid ah, kharashka waxbarashada ayaa sii kordheysa ayaa kor u kaceen. Labadan arrimood ayaa waxyeelleeyey qiimaha net heshay ardayda, gaar ahaan kuwa ku jira fasalada cidhiidhiga ah. Sidaa darteed waxay u baahan tahay dadaal dheeraad ah oo ku saabsan qayb ka mid ah barte kasta haddii ay qabaan in ay gaaraan faa'iido badnaan ka mid ka mid ah koorsooyinka ama fasalo kuwa. Internet waxay bixisaa wax badan oo wax barasho, laakiin tani laga yaabaa in aan la kartoo ku filan oo ay koorso kasta. Tani waa waxa macnaha Lugood.
Ardayda ka soo adduunka oo dhan ka heli kartaa xarunta khayraadka online ugu weyn caalamka ee la qalab waxbarasho ee jaamacadaha horseedka u ah aduunka gabi ahaanba bilaash ah. Arday kasta oo marin u heli karaan gabi ahaanba wax kasta oo dabcan ku soo saarney ugu weyn online waxbarasho; ka waxbarasho ee Shakespeare baadhitaan ee Cosmos ee.
Kuwa laga yaabaa in aan fahmi macalimiinta iyo u baahan tahay faahfaahin dheeraada, kuwa aad u mashquul oo aad rabto in ay bartaan on go ama gargaarka guryaha iyo guryahoodii, oo kuwa aan awoodin laga yaabaa boqol ama malaayiin doolar si loogu bixiyo a Dabcan ee jaamacadaha keentay haatan ku yeelan karto fursad ay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka fasalka. Faa'iidada ku daray waa in aad leedahay Raalli ahaanshaha helitaanka kala duwan ee macallimiintooda.
Waxaa suurto gal ah in labada qof ee soo socda ee sano, Lugood U hubaal siin doonaa macnaha cusub in industry waxbarashada sida i Gurtida siiyey macne cusub in waaxda muusikada. Halka jaamacadaha ma kasban ka dhajinta content on Lugood U aadan, inay faa'iido xoojinta brand-magacyadooda adduunka oo dhan, xoojinta bulshooyinka ay Qalinjabiyeyaasha iyo fursad ay ku soo laaban bulshada siin.
Qaybta 1. Waa maxay Lugood U Qaybta 2. Resources on Lugood U Qaybta 3. Sample A Hay'adaha la Content Great on Lugood U Qaybta 4. Faa'iidooyinka Lugood U Qaybta 5. Sida loo Isticmaalo Lugood U Qaybta 6. Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo ku saabsan Lugood U Qaybta 7. Alternative Apps kale ee Lugood U mid Qaybta 8. Muxuu Ma jiro Lugood ee Android Qaybta 9. Top 3 Lugood U Alternative App on Android Device Qaybta 10. Sida loo maamulo Alternative Lugood U ah Apps u Device Android
Qaybta 1. Waa maxay Lugood U
Lugood U waa mid ka mid ah meelaha gaar ah dukaanka Apple ayaa u ogolaanaya Hay'adaha Higher Education of waxbarashada, goobaha waxbarashada aan faa'iido doon ahayn iyo K-12 instutions in ay soo saaraan content maqal iyo muuqaal ah oo la dhigay markaas uu diyaar u Times oo soo degsado barta. Iyada oo howlan la Qalabka telefoonada gacanta, dadka isticmaala waxay yeelan karaan faa'iido ah ee ay content arkaysid waxbarasho ee kombiyuutarada shakhsi ahaaneed ama badinta ay waqti iyo maqli to content dhaqaaqo halka.
Lugood U ayaa la sheegay inuu ka bilowday dhawr sano ka hor (qiyaastii 2007) la jaamacadaha iyo machadyada yar dhajinta content on Lugood.
Qaybta 2. Resources on Lugood U
Content ayaa ku Lugood U asal ahaan ka kooban tahay muxaadarooyin Dabcan, bannaanbaxyo shaybaarka, waxyaabaha ciyaaraha iyo safaro campus iyo kuwo kale oo ah qaab Cajalado, videos, PDFs ama waraaqaha eray ka mid ah kuwa kale. Saddex boqol ka badan jaamacadaha iyo koleejyada ka qayb gacan ka raalli bogga Lugood U. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah jaamacadaha iyo kulliyadaha, taas oo gacan ka raalli Lugood U
* Queen ayaa University
* Kulliyadaha bulshada Broome
* Edeb fiqi seminary
* Gobolka Alabama University
* Otis College of Art iyo Design
Inta kale ee liiska jaamacadaha iyo koleejyada kuwaas oo ay ka kooban on Lugood U laga heli karaa link soo socda;
Barnaamijku wuxuu ku Lugood U sidoo kale waxaa ka mid ah content ka hay'adaha non-sare-waxbarasho. Waxaa ka mid ah hay'adaha sida 92aad St. Y, ayaa Museum of Art casriga ah, Public Radio International oo Smithsonian Folkways.
Ugu dambayn, waxaa ka mid ah content ka K-12 hay'adaha waxbarashada, ka kooban yahay noocyo kala duwan oo hay'adaha waxbarashada ee caalamiga ah iyo waaxaha dawladda ee waxbarashada.
Qaybta 3. Sample A Hay'adaha la Content Great on Lugood U
Iyadoo in ka badan 300 jaamacadaha iyo koleejyada bixinta content, dadka isticmaala wax weyn oo ay shaqo ka helo ugu fiican ee khayraadka ay leeyihiin. Muujinayo on a jaamacadaha yar iyo kuliyadaha taas oo ay ku taagan yihiin ee content dabcan ay caawin kara cilmi baaris ku Lugood, halkan waxaa ku yaal dhawr hay'adaha kuwii;
Massachusetts Institute of Technology, MIT ayaa barbaro ka xoog bixinta koorsooyin online ayaa sidaas si karti iyo hufnaan u dhiibay content in kac daro bartayaasha online (tusaale waa Physics content Dabcan MIT ee Walter HG Lewin ee). Its dhibcood oo kale oo ka mid ah xoog Hordhaca Sayniska Kombiyuutarka ah iyo Barnaamijyeynta , Hordhaca Psychology , Calculus Doorsoome Single , Hordhaca Biology , iyo Physics I: Makaanikada Qadiimiga ah iyo kuwo kale. Waxaad ka heli kartaa shiidaa kasta oo dabcan mawduucyada taabanaya. On i Gurtida U, MIT bixisaa content free bixi karo. Waxaad heli yaabaa content la mid ah ka ay website.
Stanford University, qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee Stanford University ee ka kooban yihiin Evening An la Thomas Jefferson , Teaching & Learning , Hordhaca Robotics , Hordhaca Chemical Engineering , Fine Arts , Studies Film , Taariikhda , History 122: Taariikhda US ee Tan iyo 1877, Horudhac si quman Dynamical Systems, Philosophy , Historical Ciise , Journalism iyo America ee Ciise . Content dabcan ay majorly waa ka kala qaybsanaan waxbarashada iyo ka mid ah dhowr ka mid ah koorsooyinka undergraduate.
UC Berkeley, tusaale ka mid ah ay ka kooban tahay waa History 5: Ilbaxnimo Yurub ka Renaissance si ay u soo bandhigaan . Hay'ad wuxuu bixiyaa tiro ka mid ah koorsooyinka sida Lugood U; boqol ee macallimiintooda, iyo rikoodh symposia, dhacdooyinka gaarka ah, guddi ka mid yihiin wada hadal.
Yale University: qaar ka mid ah shuqulladeedu ay ka mid ah; sida loo qoro Qorshaha Business ah , oo sharciga ka mid ah kuwo kale oo badan. Inta badan furan content barnaamijka Dabcan Yale University ee waxaa laga heli karaa i Gurtida U.
Open University: qaar ka mid ah shuqulladeedu ay ka mid ah; Baadhitaanka barashada iyo baridda ee Caalamka Real iyo Virtual , L192 Bon tago 'Hordhac Faransiis bilowga ah , L194 Portales: bilowga 'Isbaanish , L193: Rundblick: bilowga 'Jarmal . Jaamacadda Open ayaa laftiisa u hibeeyeen ilaa ay hubinta iyo aad u badan ee ay ka kooban tahay waxaa posted in i Gurtida U.
University of Oxford: tusaalooyin shuqulladeedu ay ka mid ah; General Philosophy , Makaanikada Chemistry Quantum , Cancer caalamka soo koraya , Dhisidda Business ah: Ganacsi iyo Qorshaha Business aragtida . Ardayda iyo ardayda ee guud hubaal ka faa'iidaysan doonto kheyraadkeeda kuwan.
University of Cambridge: Waxaa jira wax badan in mid ka baran karaan Jaamacadda Cambridge ee i Gurtida U content. Waxaa jira content sida; Anthropology , iyo Maaliyadda & Dhaqaalaha
New Jersey Institute of Technology, 28 koorsooyinka sida February, 2010, ay posted on Koorsooyinka sayniska iyo tiknoolajiyada, iyadoo dhowr ah oo ku saabsan Literatures.
University of California, Davis, sida February 2010, waxa uu posted 19 Koorsooyinka, kuwaas oo intooda badan ku jira computer science, cilmi nafsiga iyo bayoolaji.
Kuwani waa dhawr ka mid ah qaar ka mid ah hay'adaha badan oo ay leeyihiin content weyn Lugood U.
Qaybta 4. Faa'iidooyinka Lugood U
1. qiimaha No lug
Ma ahan wax sahlan in ka gala irridaha jaamacadaha haybadda leh sida Yale, Oxford, Cambridge, Harvard iyo MIT kuwo kale. Marka laga reebo habka adag ee ogolaado, qarashka badan waa arrin muhiim ah in caqabad badan oo ka soo biiray hay'adahaasi. Iyadoo Lugood U, ma jiro waxay u baahan yihiin in ay marmarsiiyo u oo aan lahayn aqoon ku Xukumaysa Iana Siiyey wax-qabadka ka iyo hay'ado badan oo kale. Wax kasta oo ku xiran ama dabcan, si kastaba ha ahaatee fudud ama sare, waxaa jira macluumaad badan oo in arki doonaa in aad hesho weliba waxgarasho ah mawduuc kasta, dabcan ama muxaadaro.
Wixii macallin, ardayda daawadaan nuxurka waxbarashada jaamacadaha kale sida Harvard, Yale iyo MIT ka hor imanaya si ay fasalka ka caawin kara kor loogu qaado fahamka ee nuxurka waxbarashada. Marka ay ku jiraan fasalka, macallinka hadda iyaga galaan yaabaa in waxbarasho qoto dheer oo ka tarjumaya.
2. bixinta wax ku ool ah oo ka kooban dabcan la files warbaahinta
Cilmibaaris ayaa sheegaysa in isticmaalka dareenka barashada iyo gaar ahaan markuu arkay oo maqlay caawinaya kuwa wax baranaya haleelaan fikradaha si fudud. Xaaladdan oo ka mid ah ayaa doonaya in ay ku daraan files video iyo files audio ay fasalka, ikhtiyaarka ugu fiican u noqon lahaa in la isticmaalo Lugood. Lugood bixisaa kaydinta weyn u faylasha sida, gaar ahaan kuwa ku qoran domain UTexas. Ardaydu waxay ka dibna u eegaan yaabaa content ka hor fasalka oo markaas macalin u samayn lahayd sharaxaad dheeraad ah fasalka.
3. Waqtiga ku tuntay notes
Markii ugu qoraalada ku tuntay gudaha video ah oo kasoo muuqdo in Lugood U waa qalab weyn oo in macalimiinta iyo sidoo kale ardayda ka faa'iideysan karaan in kor u qaadidda khibradda waxbarashada ay.
Qaybta 5. Sida loo Isticmaalo Lugood U
Lugood U ma noqon karaan kuwo wax ka Khayrroon wixii interface ka bixisaa; waa user saaxiibtinimo, uma baahnid inaad u baahan tahay tababar si aad u maraan bogga.
Si aad ula bilowdo, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho Lugood rakiban ee kombiyuutarada ay. Waxaa diyaar u ah Mac nidaamyada hawlgalka iyo daaqadaha ka hawlgala nidaamka; hadba hal qol oo aad download it.
On toolbar in uu yahay guud ahaan dusha sare ee bogga ugu weyn, dooro 'Lugood U'. Iyada oo ay taasi aad ku sugan tahay Lugood U. Marka gudaha, waxaa jira qaybaha aad kaas oo caleenta laga yaabaa inuu si aad u hesho macluumaadka aad u baahan tahay. Waxaa ka mid ah; doorashada dugsiga, maado, ugu soo bixi iyo ugu dambayntiina koorsooyinka xusid mudan. Content waa in qaab PDF, videos, Cajalado, taxane ah oo muxaadarooyin iyo eBooks. Dooro qaab aad rabto in aad content iyo download it. Waa in hal mar soo bixi loo isticmaali karaa kombiyuutarka la adeegsanaayo, iPad, iPod ama.
Qaybta 6. Inta Badan La Isweydiiyo ee ku saabsan Lugood U
Q1. Xaggee ka heli kartaa mid ka mid ah app Lugood U?
Jawaab: La app Lugood U lagu karaan si xor ah bixi dukaanka app ee ah iPad, iPod iPhone iyo.
Q2. App Lugood U laga heli karaa dal kasta oo leh dukaanka app ah?
Jawaab: Haa, app Lugood U laga heli karaa dal kasta oo leh dukaanka app ah.
Q3. Maxaan u baahan tahay si ay u isticmaalaan app Lugood U?
. * Lugood U app
* Waxaad u baahan tahay in ay macruufka 5 ama Lugood 10.5.2 ama ka dib haddii aad isticmaalayso ah iPad, iPod iyo iPhone.
* Waa in aad leedahay xisaabta la dukaanka Lugood in aad kala soo bixi content ka saarney Lugood U .
Q4. Sidee baa nin keliya waxay heli karaan app buugga Lugood U ah?
Jawaab: On the app Lugood U, ka jaftaa ku icon Lugood U si aad u eegto aad guugta. In geeska sare ee aad guugta, ka jaftaa button buugga inuu muujiyo ka soo saarney Lugood U ah. Saarney waxay bixisaa in ka badan 800,000 oo content dabcan lacag la'aan ah wargeliyaan muxaadarooyin, filimada, videos iyo waxbarasho kale.
Q5. Ma koorsooyinka iyo content on itune U soo bixi xaq u leedahay in aan iPad, iPod iyo iPhone?
Jawaab: Haa, marka aad ku sawirnaa badhanka download aad iPhone, iPad iyo iPod, shayga waxaa si toos ah lagala soo bixi in aad guugta.
Q6. My computer Ma isticmaali karaa si ay u soo bixi content ka Lugood?
Jawaab: Haa aad karto, laakiin waxaa jira content u baahan doonto app Lugood U in la heli karo, waxaa wanaagsanaan lahayd in aad leedahay app Lugood U.
Q7. Mid ka mid ah dib kartaa meel content in la soo bixi ka Lugood?
Jawaab: Haa, content in aad ka soo dejisan buugga Lugood U diyaar u ah samaynta gurmad ah mar kasta oo ay tahay in aad awoodid in synch qalab aad kombiyuutarka.
Q8. Lugood U ma xaddido content in mid ka mid kala soo bixi kartaa
Aswer: Lugood U ma xaddido content in mid ka mid kala soo bixi kartaa ay guugta ay qalab; waxa ay ku xiran meel bannaan oo laga heli karaa qalab aad.
Q9. Maxaa dhacaya haddii aanan helin aan nuxurka waxbarashada macallimiinta on Lugood U?
Jawaab: Haddii hal sabab mise mid kale ma awoodaan in ay helaan content dabcan aad MACALLINKA, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay isaga soo xiriir si URL koorsada, muhiimka ah ee URL kaa gelin doonaa browser si ay u helaan tusmada koorsada.
Q10. Hal abuuri karaa qoraalada?
Jawaab: Ma jirto tab ah qoraalada hidi on app Lugood oo awood u isticmaala si ay u abuuraan notes kooras siiyey, Bookmarks helaan iyo qoraallada buuga, iyo sidoo kale muujin content ee buugaagta kooras siiyey isticmaalaya tab galkaaga. Si aad u isticmaasho habkaani, u tag badhanka qoraalada iyo garaac qoraalada buugga.
Q11. Ka Lugood U videos app play iyo files audio ma ka mid ah content koorsada?
Jawaab: Haa, Lugood ciyaara oo dhan videos iyo files audio ka mid ah in wax kasta oo content helay on Lugood.
Q12. Ma jiraan wax kale oo aan dhicin in Lugood U u Android?
Jawaab: Haa, waxaa jira dhowr barnaamijyo kala duwan si ay u Lugood U u androids, tusaale ahaan, tunesviewer, TED iwm
Q13. Waxaa loo isticmaali karaa Lugood U on Android?
Jawaab: Maya, haatan, waxaa loogu tala galay oo keliya in la isticmaalo waxyaabaha Apple. Recent news shaaca ka qaaday in ay jiraan qorshe ay Apple waayo, isku mustaqbalka.
Qaybta 7. Apps kale Alternative for Lugood U mid
1. SynciOS : Tani waa app xor ah oo bixiya duwan Lugood.
2. PodTrans: dhibcaha App Tani heer sare ah oo la xiriira files ka computer ka gudbaayo qalab kasta oo la siiyo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu heeso iyo videos wareejiyo iPad, iPod iPhone ama aan lahayn Lugood aan tirtiro content asalka ah. Si ka duwan Lugood, weli waxaa loo isticmaali karaa in ay ka Qalabka telefoonada gacanta lagu wareejiyo file dib ugu PC-Lugood ee waxba ma qaban karno.
3. Ecoute: widget waa customizable naftaada xakamee, music iyo music soo degida, filimada iyo sidoo kale podcasts. Waxay bixisaa isku xirnaanta la dhufto ee warbaahinta bulshada. Air play taageertaa music geeyo iyo browser hidi awood u maktabadda doorashada music Lugood u ciyaaro.
4. Hulu Plus: app waxay badanaa awood aad ku raaxaysan taxane classic ay ka mid yihiin Battlestar iyo Lost Gallactica badan WiFi, 4G ama 3G. Waxaa sii kara wadooyin waxa aad soo jeeda tago si uu u daawado qaybta xigta.
5. History: Waxay bixisaa youw badan oo dhacdooyin. Haddii aad qabtid dhacdooyin badan oo doonaya in ay daawadaan ugu, waxaad samayn kartaa watchlist iyaga. Inaddtionally, waxaad sahamin kartaa xulashada clips ku saabsan qaybaha ugu soo jiidasho leh oo taariikhda.
6. Plex: Waxay ka caawisaa si ay u maareeyaan warbaahinta gaarka ah waxba kama meesha aad u dhawraan. Taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku raaxaysato warbaahinta aad ku qalab kasta. Ka sokow, aad awoodaan in ay sii qulquli music, videos, sawiro iyo filimo guriga si aad iPhone, iPod Touch ama iPad ka your computer guriga socda Plex Media Server.
Qaybta 8. Muxuu Ma jiro Lugood on Device Android
Waxaa jiray fikirro daneeyayaasha shaqsi ah in siday suuragal u ah Apple isagoo Lugood ay Android. Fikirro noocan oo kale ah ayaa la hadlay Steve Wozniak ay wada-aasaasaha Apple. Waxa xiiso leh, Apple leedahay kobaca ka Company bilowga Macintosh in ay xaaladda hadda bilowga ah la Lugood iyo iPad (taasi waa, inkastoo goor dambe Steve Jobs isagoo sheegay in sida dhaqaaqo dhici kartaa oo kaliya 'uu dhintay jirka'). Ganacsiga Tani kabsatay Apple sarreysa sare ee ganacsiga ee xaqiiqda laban laabmay share suuqa ay. Lugood ahaa UNI- daaqadaha suuragelinayo users badan si ay u helaan adeegyada fudayd badan leh. Iyada oo ay tani u adeegay u dhaliyey in boqolkiiba sare ee dadka isticmaala Windows, kuwa ku Android laga yaabaa in aan ku faraxsan tahay is la isticmaalo Lugood U. Waa hagaag, iftiinka taariikhdooda, Apple waxay u baahan karaan in dib looga fikiro istiraatijiyad la xiriira dhismaha darbiyada ku dhawaad ​​ay macruufka iyo OSX.
Android users sidaas daraaddeed seegi doono Lugood videos, iBooks, iyo iPhone Apps kuwo kale. Sidaas waxa ay noqon kartaa sababaha salka la'aanta ah ee Lugood ee Android?
First ka mid ah sababaha Lugood oo aan ku Android waa mid khuseysa in la Timaadda shirkado kale oo ka shaqeeya. Iyadoo guuray Lugood in Android waa arrin in ay qaadan kartaa oo kaliya waqti yar, sida ku biiro siin kartaa qaar ka mid ah kalsoonidii in madal in la lahaa guuraayey. Apple inuusan xiiseyneynin inuu mannaysto sida adag-shaqeeyay kalsoonidii on a madal-saddexaad.
Marka labaad , Lugood ma aha mushaharka muhiim ah dakhliga Apple. Qaado tusaale ahaan Lugood U; la siiyo gabi ahaanba bilaash ah. Apple qaata wax badan ka hardware badan software. Adeegyada noocan oo kale ah sida Lugood waxaa loogu talogalay in la xoojiyo noocyada ay suuqa. Guuraayey Android hubaal noqon lahayd in la xoojiyo waxyaabaha tartame ee.
Mar saddexaad , Apple isticmaalaa Lugood si 'qufulka in' dadka isticmaala ay iyada oo maal-shakhsiga ah ee isticmaala in music Lugood iyo filimada iyo sidoo kale qalabka waxbarashada. Dadka isticmaala inta badan u leeyihiin in ay laba jeer ka hor inta qabaa beddelo si madal kale. Guuray Lugood in Android sahli doontaa in macaamiisha in ay u baddashaan ka Apple ayaa madal si kale oo dhaawici doonto ganacsiga.
Ugu dambayn , halka Steve Wozniak (co-aasaasihii Apple) ayaa fikrado sida, uu mar dambe waa la Apple. Taasi waxay u keentay caqabad ku ah oo la xiriira Apple qaadato fikrad caynkaas ah, waxaa la shakhsiyeeyo oo u Kaxaynaa guulaystay hirgelinta-lagama yaabo in Apple maqlin oo la hirgeliyo fikrad this.
Qaybta 9. Top 3 Lugood U Alternative App on Device Android
Udemy: Koorsooyinka Online 18MB 3,000,000
1. Koorsooyinka Udemy Online
Udemy dhigaa madal ee dunida ugu weyn koorsooyinka ku-baahida online. Qof kasta oo raba in ay iska iibiso koorso online-Udemy noqon lahaa meel ku fiican iyaga u.
* Udemy ku faantaa in ka badan 3 milyan oo ardayda 1000000 xubin arday bil kasta.
* 16,000 oo koorsooyin lagu daray in ay ku aaddan wax kasta ka bilowda jaamacadaha in ay is baray iyo mowduucyo xiiso.
* Madal waa user-friendly oo ka dhigaysa mid u fudud in ay baadhid koorasyo ​​ah.
* Waa lacag la'aan ah inay ka qayb qaataan koorasyo ​​ku saabsan Udemy iyo ardayda waxay leeyihiin faa'iido ah arkaysid dhammaan koorsooyinka ka mid ah macalimiinta ugu cadcad.
* Wixii macalimiin, Udemy bixisaa boosteejo ah oo ku muteystay ka koorsooyinka kuwa '.
* In ka badan 60% video on koox kasta tiradeedu waxay dul bixiyey Udemy
Download Udemy: Koorsooyinka Online ka Google Play Store >>
TED waa urur aan faa'iido doon ahayn Sharaf in saamiyada 'fikradaha mudan in la faafiyo'. Waxaa qoreysa qaar ka mid ah ku hadla-TED ugu caansan malana waxba ka badan 1000 18 daqiiqo khudbado adkaa. Waxaa mowduucyada sida farsamada, madadaalada, ganacsiga, design, cadaalada bulshada iyo sayniska iyo kuwo kale.
* TED ayaa interface user-friendly leh "ciyaaray wadahadalo TED" ee xarunta oo hore iyo sidoo kale leeyahay tab ah oo awood u isticmaala xitaa iyada oo maktabadda oo dhan iyada oo loo marayo kala duwan.
* TED u oggolaanaysa in degsado iyo kaydinta of videos for isticmaalka offline
* TED u oggolaanaysa in la dhageysto oo kaliya videos-tani ku yimaado anfacaya marka mid ka mid ah uu doonayo in uu multitask
* TED ayaa videos la subtitles dhowr luqadood.
Download TED ka Google Play Store >>
TuneSpace waa app ah Android inay bixiyaan aad u helaan warbaahinta Lugood iyo Nayroobi ee dugsiga, kulliyad, jaamacad, urur. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa waxyaabaha soo socda:
* Koorsooyinka Creat iyo dhirta qaybood oo ku jira sida qalabka, videos Dabcan, cajalad la duubay, news, iyo in ka badan.
* Si fudud wadaagaan content warbaahinta oo aad saaxiibadaa
* Save warbaahinta ku saabsan qalabka loogu daawashada offline.
Download TuneSpace ka Google Play Store >>
Qaybta 10. Sida loo maamulo Alternative Lugood U ah Apps u Device Android
Download Lugood U u barnaamijyadooda Android ka Google Play.
Ku rakib badan oo Chine kale Lugood U u Android ka PC.
Dhoofinta Lugood U barnaamijyadooda kale oo ay PC ku yaalla.
La wadaag jecel Lugood U u barnaamijyadooda Android Twitter, Facebook iyo SMS.
Delete rabin Lugood U u Android Apps qolka loogu talagalay dadka kale sameeyaan.
Si buuxda u la jaan HTC, LG, Samsung, Google, Motorola, Huawei, Sony iyo ka badan.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma dowload aad ha ama share barnaamijyadooda, ama u guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD.
Messages Android kaabta in Computer
Nuqul Xiriirada ka Android Phone
Dhaqaaq Xiriirada u Phone New Android
> Resource > Lugood > Wax walba waa in aad ogaato oo ku saabsan Lugood U iyo Lugood U u Android